အခွန်နှုန်း များပြားနေသောကြောင့် လယ်သမားများ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ( ၇ ) အမည်ပေါက် လျှောက် ရန်အခက်အခဲများဖြစ်နေ - ALINNMYAY
Home MM-NEWS အခွန်နှုန်း များပြားနေသောကြောင့် လယ်သမားများ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ( ၇ ) အမည်ပေါက် လျှောက် ရန်အခက်အခဲများဖြစ်နေ
အခွန်နှုန်း များပြားနေသောကြောင့် လယ်သမားများ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ( ၇ ) အမည်ပေါက် လျှောက် ရန်အခက်အခဲများဖြစ်နေ
တောင်သူလယ်သမားများ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ( ၇ ) အား မိမိတို့ အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲချင်ပေမယ့် အခွန်နှုန်းများ များပြားနေသောကြောင့် အမည်ပေါက်ပြောင်းရန်အတွက် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေကြကြောင်း တောင်သူများထံမှ သိရသည်။
လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ( ၇ )များ အမည်ပေါက်ပြောင်းရန်အတွက် ဇွန် ( ၁ )ရက်နေ့မှ စတင်ပြောင်းလဲ နိုင်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပေမယ့် ယနေ့အချိန်အထိ အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲသူ နည်းပါးနေကြောင်း ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီးဋ္ဌာမှ သိရသည်။
“အမည်ပေါက် ပြောင်းချင်ပေမယ့် ဆောင်ရမည့်အခွန်များပြားနေသောကြောင့် ပြောင်းမည်ဟု စဉ်းစားထားပေမယ့် မပြောင်းနိုင်တော့ပါဘူး ၊ လယ်သမားက ဘယ်က ဝင်ငွေရလို့ ဒီလောက် အခွန်ငွေ ဆောင်နိုင်မှာလည်းဟု ” လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ( ၇ ) အမည်ပေါက်ပြောင်းလိုသော လယ်သမား ဦးမြင့်စိုးက ဆိုသည်။
လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ (၇) အမည်ပေါက်ပြောင်းရန်အတွက် အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ရပြီး ၊ လယ်ယာမြေ တန်ဖိုးအား ရပ်ကျေး လယ် / စီ မှ မြေအမျိုးအစားအလိုက် ရာဖြတ်ပေးထားပြီး အဆင့်ဆင့်တင်ပြထား​ ကြောင်းလည်း ​သိရသည် ။
“မြေမျိုးအစားလိုက် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးထားပြီး ဒီမှာတော့ ( ၁ ဧက ) သိန်း ၂၀ ၊ သိန်း ၃၀ ၊ သိန်း ၅၀ စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ် ၊ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် လယ်မြေ တန်ဖိုးအလိုက် ၇. ၅ % ပေးဆောင်းရမည်ဟု ” တောင်ငူမြို့နယ် လယ်/စီ ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ( ၇ ) အမည်ပေါက် လျှောက်ထားရာတွင် ​လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဦးစီးဋ္ဌာနသို့ အခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဋ္ဌာနသို့ ၇ ရာခိုင်နှုန်း ၊ စာချုပ် စာတမ်း မှတ်တမ်းတင်ခ ၀. ၅ ရာခိုင်နှုန်း စုစုပေါင်း ၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အခွန်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ဥပမာ အားဖြင့် သိန်း ၁ဝဝကျပ် သတ်မှတ်ပေးထားသော လယ် ၁ဧက အတွက် အခွန်ငွေ ၉သိန်းကျော် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
Previous articleမျက်နှာချင်းဆိုင်မှ လာသောကားအားဆိုင်ကယ်မှ အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ ဝင်ရောက်တိုက်မိရာ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူသေဆုံး
Next articleစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးကို တဲဟောင်းတစ်လုံးအတွင်း လိမ်ခေါ်ပြီး သားမယားပြုကျင့်မှု